galmudugnews.com » Madaxweyne Shariif oo ku dhaartay burburinta Galmudug State – Nin uu Hobyo u magacabay
Home » WARARKA » Madaxweyne Shariif oo ku dhaartay burburinta Galmudug State – Nin uu Hobyo u magacabay Madaxweyne Shariif oo ku dhaartay burburinta Galmudug State – Nin uu Hobyo u magacabay galmudug on
No Comment Views 164972Galmudugnews.com – Madaxweynaha waqtigiisa gabaabsiga yahay ee Shariif Sheekh Ahmed ayaa Gudoomiyaha Gobolka Hobyo u magacaabau nin u dhashay Beesha Reer Xaaji Suleyman Habargidir oo ka tirsan burcad badeeda Somalia halka uu Gudoomiyaha Galgaduud u magacaabay nin u dhashay beesha Ceyr Habargidir.
Shariif Sheekh Ahmed oo aan Gudoomiye u magacaabi karin goboladda Puntland iyo Somaliland wuxuu ku dhaartay inuu burburin doono Maamulka Galmudug si uu uga taqaluso beesha Sacad Habargidir.
Shariif Ahmed wuxuu hore u shaaciyay inuu Garoonka Galkacyo ugu magacdaray Abdullahi Yusuf Ahmed allaha u naxariistee.
Sida muuqato Jeneral Cabdi Qaybdiid oo looga fadhiyay inuu Shariif Ahmed ka celiyo dadkiisa iyo degaanadiisa wuxuu noqday gantaalka lagu burburinaa Galmudug State.
Musharaxiinta faraha badan ee Koofurta Galkacyo iskugu tegay xagee maamuli doonaan mar hadii goboladii Maamulka Galmudug loo magacaabay shaqsiyaad si beesha Habargidir la iskugu diro.
Shariif Ahmed wuxuu iska jaheeyay Cabdi Qaybdiid oo sida muuqato ujeedkiisu yahay inuu laayo Agoonta uu aabayaashooda hore u dilay.
Beesha Sacad Habargidir oo laga sugayay inay Shariif Sheekh Ahmed si cad uga hortagaan waxay siiyeen gabadh.
Dulucda Warbixinta waxay tahay in Beesha Sacad Habargidir laba kala doorato:-
1- Inay si ficil xambaarsan uga jawaabaan Cuqdada iyo Cadaawada Shariif Ahmed.
2- Inay khabriyadii lagu duugi lahaa sii qotaan iyagoo nool.
Ujeedka uu Madaxweyne Shariif ka leeyahay inuu Hobyo iyo Galgaduud u magacaabo siyaasiyiin u dhashay beesha Habargidir maxay tahay?
Shariifka wuxuu guluf ugu jiraa inuu fashiliyo dadaalada dib u heshiisiinta iyo horumarinta beelaha Habargidir ee gudigga qurba joogta wadaan.
Shariif wuxuu aad uga xun yahay heshiiskii xalay Muqdisho ka dhacay ee Musharaxiinta beesha Habargidir u wada tanasuleen Abdullahi Ahmed Cadow.
Shariifka wuxuu gobolka Hiiraan u magacaabay nin uu ku hanuuniyay inuu qabsado Matabaan .
Shariifka wuxuu qoobka ciyaarkiisu yahay inuu Habargidir isku diro ,sidoo kalena beelaha la dego ku diro sida Xawaadle iyo Murusade.
Kuwa sheeganaya Musharaxiinta ee ku hardamaya Galmudug cidleey heehaabayaan.waxaana horyaal inay xukun jaceylkooda ka doorbidaan sidii ay dadkooda iyo degaanadooda u badbaadin lahaayeen.
Qurba joogta Beesha Habargidir iyo Duduble waa inay hagardaamada hadoodiman ee Shariif Ahmed si ficila uga jawaabaan ama ay dhigaan tacsida Habargidir iyo adeerkood Mohamud Hiraab.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21013 hitsContact US - 19647 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15740 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15180 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13938 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13875 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13819 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13427 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11772 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11748 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11727 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11525 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11505 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11357 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11168 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11154 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11054 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11041 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10764 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10352 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10270 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10235 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10012 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9948 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9785 hits Home About